Jaaliyadda gobolka Godey ee aduunka dacaladiisa oo taageertay magacaabidda Cabdi Sonkor |
Washington,(NogobNews)06/09/2010 – Jaaliyadda gobolka Godey ee aduunka dacalladiisa ayaa si weyn u taageertay magacaabidda gudoomiyaha cusub ee gobolka Godey, mudane Cabdi Xuseen Cabdi (Cabdi Sonkor).
Madaxweynaha deegaanka, mudane Cabdi Maxamud Cumar, ayaa dorraad galab gudoomiyaha gobolka Godey u magacaabay mudane Cabdi Sonkor.
Mudane Cabdi Sonkor ayaa katirsan xildhibaannada laga soo doorto gobolka Godey, ahna shaqsi dhalinyaro ah oo ay ka go’antahay nabadda iyo horumarka gobolka Godey.
Jaaliyadda gobolka Godey oo xalay yeeshay kulan qadka telephoneka ah ee afka qalaad lagu yiraahdo “conference call” ayaa waxey isku booriyeen in guud ahaan jaaliyadda iyo shacabka gobolka oo isku duuban ay si weyn ula shaqeeyaan mudane Cabdi Sonkor.
Masuuliyiinta jaaliyadda ee Ingriiksa iyo Mareykanka oo hadallo kooban ka jeedisay meesha ayaa farta ku fiiqay baahida loo qabo in gobolka Godey laga sifeeyo cid kasta oo carqalad ku ah nabadda iyo horumarka guud ahaan deegaanka.
Jaaliyaddu waxey u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee xilka loo dhaariyey, mudane Cabdi Maxamud Cumar, oo ay jaaliyaddu isku raacday inuu yahay shaqsi ay ku weyn tahay wadaniyadda oo haddii si dhab ah loola shaqeeyo wax weyn qaban kara.
Jaaliyaddu waxaa kale oo ay si weyn ugu mahadcelisay gudoomiyaha xisbiga haya talada dowlad deegaanka Soomaalida, mudane Cabdifitaax Sheekh Cabdullahi, oo ay sheegtay inuu dadaal dheeri ah ku bixiyey isku xidhka dowladda iyo shacabka.
Jaaliyaddu waxey ku ballantay inay yeelato kulamo dheeraad ah oo lagaga arrinsado adkeynta nabadgalyada iyo horumarka gobolka iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida.